NO – Pann Satt Lann Books
‘NO’ လို့အမည်ရတဲ့ ဒီစာအုပ်လေးမှာ ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကြားက နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းအိမ်လေးမှာ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ချစ်ခြင်းရဲ့ လှပဆန်းကျယ်မှုတွေကို ခံစားဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပြီး…
LGBT တွေ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကြားက စံနှုန်းတွေကြား ရှင်သန်ရုန်းကန်ရတဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို လှလှပပ ဖွဲ့သီထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်…
5.7 × 0.8 × 8.2 inches
ပန်းဆက်လမ်းစာပေ၊ 2022 မတ်လ (တတိယ-ကြိမ်)
NO အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု 37 ရှိပါသည်။
Aye Chan Myint – March 27, 2022
Bookalicious (verified owner) – May 5, 2022
” ခင်ဗျားကို ငြင်းဆန်နေတာ မဟုတ်ဘူး။
လောကနိယာမနဲ့ ဆန့်ကျင်တာတွေကို ငြင်းပယ်နေတာ ”
Ex-pect, ညီ, Soul တို့ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် ဆရာမဆုခြည်ကိုဆိုရင် BL ကိုစိတ်၀င်စားတဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေ မသိတဲ့သူ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ခိုင်မာကျစ်လစ်တဲ့ ဇာတ်အိမ်၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကောင်၊ လူ့သဘာ၀ အဖွဲ့တွေနဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို ရေးသားဖော်ကျူးတဲ့နေရာမှာ သူဖတ်သူကို ရင်ထဲရောက်အောင် ရေးသားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဆရာမတစ်ဦးပေါ့….
NO ဆိုတဲ့ ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့ စာအုပ်လေးမှာ အသက် ခြောက်နှစ်ကွာတဲ့ အမျိုးသားနှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ LGBTQ+ တွေရဲ့ ပတ်၀န်းကျင်မှာ ရင်ဆိုင်ရဲ့အခက်အခဲ၊ မိသားစုတွင်း ကြုံရတဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ အရိုးပါး အရိုးပွရောဂါ၊ Coitophobia ရောဂါ စတဲ့ ဆေးပညာဆိုင်ရာ အသိပညာဗဟုသုတတွေကို ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
ခန့်သော်ဇင် ဆိုတာ အသက်(၁၉) အရွယ်ထဲက “မိန်းကလေးတွေကို စိတ်မ၀င်စားပါဘူး” ဆိုပြီး မိသားစုကိုအတိုက်အခံလုပ်ကာ Come out လုပ်ခဲ့တဲ့ ဆေးကျောင်းသားတစ်ယောက်။ ရှေးရိုးစွဲမိဘတွေရဲ့ အယူအဆကို မျက်ကွယ်ပြုရင်း ကိုယ့်ဘ၀ကို ရပ်တည်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေသူ။ သူ့ဘ၀မှာ ပထမဦးဆုံး ရင်ကိုလှုပ်ခတ်စေသူက အသက် တစ်ဆယ့်သုံးနှစ်အရွယ် ကလေးဆန်လွန်းသူ ကလေးတစ်ယောက်။ မုန့်ကျွေးရမှာစိုးလို့ လက်ပတ်ကြိုးအနီကလေးကိုပဲ ‌လက်မှာပတ်ပေးခဲ့သူ သော်တာနိုးဝေ…..
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘ၀မှာ လူတစ်ယောက်ကို နှစ်အကြာကြီး တိတ်တိတ်ကလေးချစ်မြတ်နိုးခဲ့ကြဖူးတယ်မလား ??? ကိုယ်ချစ်နေတာကို အဲ့ဒီလူ မသိပေမယ့်လဲလေ။ သူကလွဲရင် ဖွဲဆန်ကွဲလို့ သတ်မှတ်ပြီး သူ့အချစ်တစ်ခု ရဖို့တစ်ခုထဲသူသာ ကြိုးပမ်းနေခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင်ရော ….
သော်တာနိုးဝေရဲ့ ဘ၀မှာ သူ့အမေက အမြဲနံပါတ်တစ်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ အမြဲဂရုစိုက်တတ်ပြီး ကြင်နာတတ်တဲ့ မိသားစုရဲ့ အငယ်ဆုံးသားလေးဆိုပေမယ့် နိုးဝေရဲ့ အထီးကျန်မှုတွေ၊ နိုးဝေဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒတွေ၊ နိုးဝေရဲ့ အိပ်မက်တွေ‌ကို နားထောင် လက်ခံ ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် Supportive Family Type တစ်ခုတော့ မဟုတ်ခဲ့ဖူး။ Webtoon တွေဆွဲရင်း၊ အချိန်ရှိသရွေ့ စားဖို့ကိုသာတွေးရင်း၊ ဝါသနာမပါတဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကို မေလေး၊ ဖြိုးကြီး ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့ တူတူတက်ရင်း ကျင်လည်နေတဲ့ နိုးဝေရဲ့ ဘ၀ထဲကို ….. အဖေတစ်ယောက်လို၊ အစ်ကိုတစ်ယောက်လို၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လို ပေးဆပ်ဖြည့်ဆည်းရင်း နိုးဝေရဲ့ အချစ်ကို ရဖို့ ကြိုးစားရှာသူ Bro တစ်ဖြစ်လဲ ခန့်သော်ဇင်
” Platonic Love isatype of love that is not sexual or romantic, the term is derived from the name of Greek philosopher Plato. ”
အချစ်လို့ ပြောလိုက်ရင် … လူနှစ်ဦးကြားက တဏှာရာဂတပ်မက်မှုနဲ့ မကင်းနိုင်တဲ့ ပေါင်းစပ်ဆက်နွယ်မှု တစ်ခုလို့ အများစုက မြင်တတ်ကြပါတယ်။ ရိုးရိုးသာမန် ဖိုမ ချစ်ခြင်းကိုတောင် တဏှာဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက် သွတ်သွင်းပြီး မြင်ချင်သလိုမြင်နေတတ်တဲ့ ခုလိုခေတ်ကြီးမှာ သာမန်မဟုတ်တဲ့ အမျိုးသားနှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းကိုရော တဏှာခေါင်းစဉ်အောက် မသွတ်သွင်းနိုင်ပါဘူးလို့ အာမခံနိုင်ကြရဲ့လား။ ဒါပေမယ့် အတိတ်ပုံပြင်တွေ၊ ဒဏ္ဍာရီတွေမှာ တဏှာကင်းတဲ့ ချစ်ခြင်း (Platonic Love) ဆိုတာတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။
နိုးဝေရဲ့ ပထမဦးဆုံးဆိုတဲ့ အရာတွေကို ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ ခန့်သော်ဇင်တစ်ယောက်၊ အလုပ်တစ်ဖက်၊ ပညာရေးကတစ်ဖက်နှင့် ချစ်ခြင်းပဋိပက္ခတွေကြား နိုးဝေကို ဘယ်လို ပံ့ပိုးပေးမလဲ???
သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းကရော Platonic Love ဆီ ဦးတည်သွားနိုင်ပါ့မလား???
တားဆီးထားတဲ့ စည်းဘောင်တွေကြားထဲကနေရော ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ပိတ်လှောင်မှုတွေကနေရော ဘယ်လိုရုန်းထွက်ကြမလဲ???
” ပိုချစ်ရတဲ့သူ ကိုယ်ဖြစ်ပါစေလို့
မင်းလေး လိုက်မမီအောင် ကိုယ်က ပိုချစ်ပြမှာ”
( 56 မှတ်ချက်)
( 34 မှတ်ချက်)